Warshadda Buufiyo Jirka - Soosaarayaasha Buufiyo Jirka Shiinaha, Shirkado
Qubayska iyo Jidhka Shaqada Maqaarka Udgoon Fiican ee Rose Rose
BARNAAMIJKA: Pink Rose Body Mist: Buufin aad iyo aad u qurux badan oo nasasho leh. Saliida Rose waxaa loo tixgeliyaa inay tahay yareynta walbahaarka iyo hurdo hurinta iyadoo sidoo kale loo yaqaan 'aphrodisiac', oo gacan ka geysaneysa dhimirka jacaylka ah. SET dhammeystiran HBS SET wuxuu ka kooban yahay -250ml Body Mist - Sanduuqa warqadda daabacan ee midabka Faahfaahinta: • Buufintayada waxaa ku jira oo keliya maaddooyinka udgoon oo tayo sare leh oo ay ku jiraan saliid saafi ah oo saliid laga soo saaray Rosa Blossoms iyo faleebada gudaha ku jirta. • Jirkaaga qurxoon udgoon. Dhoolacaddey & madaxa u bax ...
Isku darida Saliida Muhiimka ah, udugga jirka ee lagu buufiyo wajiga, jirka, qolalka
BARNAAMIJKA: Wild Orchid leh Vanilla VANILLA WAA OGAYSIIS-JOOJINTA MUUQAALKAN SI AAD U HESHO BADAN. Kaymaha duudduuban iyo heshiisyada miraha qaniga ku ah waxay gacan ka geystaan ​​soo saarista urka dabiiciga ah ee maqaarka, dhalada farshaxanka-qurxinta lehna waxay ku darsataa soo jiidashada guud ee udgoonka. SET oo dhameystiran HADA SET Ka kooban yahay -250ml Jirku Carada - Sanduuqa warqadda daabacan ee Midab Sharaxaad: • Buufinteena waxaa ku jira oo kaliya maaddooyinka udugga oo tayo sare leh oo ay ku jiraan saliid saafi ah oo saliid laga soo saaray Rosa Blossoms iyo ro ...
Lavender Natural Body Toner spray - Feejignaan Dheeraad ah & Fuuqbaarista Wejiga Dabiiciga ah
BARNAAMIJKA: Lavender Lavender waa geedo jilicsan oo keena nabada maskaxda. waxay kaa caawineysaa inaad ku seexato caraftiisa jilicsan halka Lavender ay kaa caawineyso inaad maskaxdaada dejiso oo aad nasato jirkaaga. geedo yaryar ayaa kuu sahlaya inaad nasato. 2.COMPLETE HAAD HESHIIS SET Ka kooban yahay -250ml Body Mist - Sanduuqa warqadda daabacaadda midab Sharraxaad: • Buufinteena waxaa ku jira oo kaliya maaddooyinka udgoon oo tayo sare leh oo ay ku jiraan saliid saafi ah oo saliid laga soo saaray Rosa Blossoms iyo faleebada gurigayaga ku jirta. • Jirkaaga qurxoon udgoon. Dhoolacadeyn & ...